Proverb Afaka ny loza, fa tonga ny antambo. [Veyrières 1913 #2683]
Proverb Aza hitsahinao re ny lambako, fa ny manantsody manira no tsy afak. [Houlder 1895 #794, Cousins 1871 #386, Veyrières 1913, Rinara 1974]
Proverb Doko-dahy nisasa: ny tseroka no afaka, fa ny hamaintisana tsy miova. [Cousins 1871 #856]
Proverb Fahoriana tsy ho afaka va iny, ka dia handry aman-tany ? [Veyrières 1913 #2598, Cousins 1871 #884]
Proverb Fatakana afak’ ando, mivika tsy amin’ aretina. [Samson 1965 #F19]
Proverb Fatra-pitady ny hofany, ka manary ny tenany be. [Houlder 1895 #1671]
Proverb Fita-mora tsy afaky ny omby. [Cousins 1871 #970, Rinara 1974]
Proverb Lalana afaka ando: diavin' ny osa. [Houlder 1895 #906]
Proverb Langato nandro, dronga nisetra : ny lailay afaka fa ny taketra tavela. [Samson 1965 #L27]
Proverb Mandehana dieny malaina, fa raha mazoto tsy afaka. [Cousins 1871 #1582]
Proverb Masom-poza : malala-tsy afaka. [Samson 1965]
Proverb Miohatra ny tokonana tsy afaka, ka miohatra ny rindrina vao afaka ! [Houlder 1895]
Proverb Nify sy molotra, ka ny mahery no afaka aloha. [Houlder 1895 #382]
Proverb Ny mangidihidy tsy afaky ny lavitra. [Rinara 1974 #3114, Cousins 1871 #2326]
Proverb Nivadika ny rasa, fa ny atiny no afaka aloha. [Veyrières 1913 #2732, Cousins 1871 #2111]
Proverb Ombalahy aho afaka teo. [Houlder 1895 #811]
Proverb Raha tsarovanareo, afaka alahelo. [Veyrières 1913]
Proverb Tombom-barotra hita: fo afaka. [Houlder 1895 #1196, Veyrières 1913 #4407, Rinara 1974 #4172, Cousins 1871 #3118]
Proverb Tsy misy hidy tsy afaka alàna, na hena tsy afaka am--bilany. [Rinara 1974 #4714, Cousins 1871, Houlder 1895, Veyrières 1913, Nicol 1935]
Proverb Vady afaka tsy asesy. [Samson 1965 #V1]